यस्तो शिवलिङ्ग जहाँ हरेक १२ वर्षमा चट्याङ पर्छ,चमत्कारी शिवलिङ्गको दर्शन गर्नुहोस् । – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यस्तो शिवलिङ्ग जहाँ हरेक १२ वर्षमा चट्याङ पर्छ,चमत्कारी शिवलिङ्गको दर्शन गर्नुहोस् ।
संसारमा धेरै नै आश्चर्यमा पार्ने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । केही रहस्यमयी घटनाको वास्तविकता तथा वैज्ञानिक आधर पत्ता लगाउन मुस्किल पर्ने गर्छ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा एउटा यस्तै रहस्यमय मन्दिर छ जहाँ मन्दिरभित्र शिवलिङ्ग रहेको छ। हिमाचलको मथान भन्ने क्षेत्रमा रहेको भोलेनाथ मन्दिर रहस्यले भरिएको छ । उक्त मन्दिरमा हरेक १२ वर्षमा चट्याङ पर्दछ । तर त्यसरी चट्याङ पर्दासमेत मन्दिरमा कुनै क्षति हुँदैन । तर मन्दिरभित्र रहेको शिवलिङ्ग भने टुक्रिन्छ ।
त्यहाँका पुजारीहरुले फुटेको शिवलिंगलाई जोड्दछन् र घिउको लेप लगाउँदछन् । ताकि शिवजीले पीडाबाट राहत पाउन सकुन् । त्यसैले यो मन्दिरलाई स्थानीयले‘मख्खन महादेव’पनि भन्दछन् । यस अर्थमा उक्त शिवलिङ्ग निकै विशेष र चामत्कारिक मानिन्छ ।
पौराणिक मान्यताअनुसार त्यहाँको विशाल उपत्यका नागको रुपमा रहेको छ,जसको शिवले वध गरेका थिए । त्यसैले हरेक १२ वर्षमा भगवान इन्द्रले भोलेनाथ अर्थात् शिवजीको आज्ञा लिएर उक्त मन्दिरमा चट्याङ पार्दछन् भन्ने मान्यता रहेको छ।चट्यांङ किन पर्छ भन्ने बारेमा अझैसम्म पनि आधिकारिक तथ्य पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
किन गरिन्छ नमस्ते? कारण येस्तो छ।
नमस्कार पहिलैदेखि चलिआएको चलन हो। जसको मतलब प्रणाम पनि हो। यसको प्रयोग कुनै व्यक्तिसँग मिल्ने अथवा उनीसँग बिदाइ गर्ने समय,दुवैमा प्रयोग गरिने गरिन्छ। नमस्कार गर्नु भनेको आफूले कसै व्यक्तिलाई सम्मान दिनु पनि हो। किनकि जहिले पनि नमस्कार हामी आफू भन्दा ठुला व्यक्तिलाई नै गर्ने गर्छौँ न कि आफू भन्दा साना मानिसलाई। नमस्कार गर्नुको भनेको आफ्नो संस्कार देखाउनु पनि हो।
हामीले आफू भन्दा ठुला व्यक्तिलाई नमस्कार गर्नेपर्छ। किनकि यसले हाम्रो स्वभाव बयान गर्दछ। नमस्कार गर्नु भनेको आफ्नू भन्दा ठुला व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु वा मान्नु हो। जसले जहिले पनि आध्यात्मिक शक्तिलाई बढ़ाउछ अनि दैवी चेतना आकर्षित गर्छ। नमस्कार गर्नाले हामीमा कृतज्ञता अनि भक्तिको भावना जागृत गर्छ। उक्त कारण नमस्कार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
यदि कुनै व्यक्तिसँग भेटिदा दुवै हातलाई जोडेर नमस्कार गरिन्छ भने त्यस किसिमको नमस्कारलाई सामान्य नमस्कार भनिने गरिन्छ। प्रत्येक दिन हामी कयौँ मानिसहरूसँग भेट्दा नमस्कार गर्ने गर्छौ ।
यस प्रकारको नमस्कार हामी आफ्नो परिवार,नाता,वृद्ध तथा बाबा आमाको पैतला छोएर गर्छौ । परिवार बाहेक गुरु तथा आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको पैताला छोएर नमस्कार गर्ने गर्छौ ।
यदि हामी कुनै मठमन्दिर गएर पूजा आराधना गर्नी नमस्कार गर्छौँ भने त्यसलाई साष्टांग नमस्कार भनिन्छ । यस किसिमको नमस्कार देवी देवताको शरणमा गएर गिने गरिन्छ।
नमस्कार गर्नाले मनमा राम्रो भावना र स्वच्छ भावनाको विकास हुन्छ । जसले गर्दा सकारात्मक सोचको विकास हुने गर्छ।
नमस्कार गर्नाले आफ्नो संस्कृति झल्किदिन्छ जसले गर्दा अरूको मनमा राम्रो विचार जाग्ने गर्छ।
नमस्कारले अर्को व्यक्तिले तपाइप्रतिको राम्रो भावनाको विकास गर्दछ । यस प्रकार नमस्कार आध्यात्मिक र व्यवहारिक दुवै तरिकाले फाइदाजनक छन् ।
मन्दिरमा गएर देवीदेवताको सामु नमस्कार गर्नाले व्यक्तिको कृतज्ञताको भावना विकास हुन्छ । जसले मन र मस्तिष्क शान्त रहन्छ ।
४७ बर्ष उमेर अन्तरका भाइरल जोडिको पहिलो डेटिङमा यस्तोसम्म,भन्छन एकअर्का बिना बाच्न सक्दैनौ,अब छोरो जन्माउदै हेर्नुहोस भिडियो
एउटा कुकुरकै कारण यसरि भयो निक र प्रियंकाबीच, सोच्ने नसकिने झ’गडा ! के छ तेस्तो ?